Amasiko & Amagugu | eNanda Online
Archive | Amasiko & Amagugu RSS feed for this section
Inanda Mass Choir – Mzinyathi
Inanda Mass Choir
I-Inanda Mass Choir iyazilungiselela njalo ngamampela sonto ekhaya lika Sibongile Mhlongo, eMzinyathi
Lekhwaya iculo umculo wokholo, kodwa iyazenza nezinye izinhlobo zomculo, kuya ngomcimbi. I-Inanda Mass Choir isebenzela emphakathini. Iyazamukela izivakashi ukuthi zizobabukela ngisho beselungiselela.
Ungaxhumana nabo kulezinombolo ezilandelayo:
Dumisani Ngidi- 0793570354 noma Siboniso- 0715006320
Noma uthumele i-email ku Sabelo- sabelo35@mobileimail.vodaphone.co.za
Ukulalela umculo wabo, cindezela lapha: Inanda Mass Choir practice, Inanda Mass Choir practice 2, Inanda Mass Choir practice 3
Ulwazi ngomlando we-Inanda Mass Choir, lalela umsunguli wayo uDumisani Ngidi: Dumisani Ngidi – English
Dumisani Ngidi and Sibongile Mhlongo
Umhlonyana – Nokwanda Nene
Nokwanda Nene (left)
U-Nokwanda Nene ungomunye wabantu bokuqala ukuthi baphawule ngale-website, wafunda okwakubhalwe yimi ngomhlonyana bese waxhumana nami. U-Nokwanda Nene uhlala eChesterville, ufunda eClairwood Secondary School, uzoba neminyaka engu 16 kulonyaka.
U-Nokwanda Nene, wayebheka angasakuthole ngomhlanyana njengoba ebenganalo ulwazi olutheni ngokubaluleka komhlonaya, nezinto ekumele zenziwe mekwenziwa lomcimbi. Wathola le-website iwusizo kuyena, waluthokozela ulwazi aluthola lapha ngalolusiko lomhlonyana njengoba wayezokwenzelwa umhonyana. Bese wangithinta kwi-facebook, ebuza ngezinto ebekade engaziqondi kahle ngo mhlonanya.
Mechaza uthi, into eyaba inkinga ukuthola amantombazane azogonqa naye, ekwiwona azophinde amusinise, kakhulukazi ngoba wayefuna amantombazane angaphezu kwa 10. Inkinga kwaba ukuthi, abanye bamtshela ukuthi abasaphumeleli ngomzuzu wokugcina, kwakumele athole amanye amantombazane angangaye, acele nemvumo kubazali. Wagcina ekwazi ukuthola amantombazane angu 14. Lawo mantombazane afika ngo-Mgqibelo ntambama, umhlonyana uzoba ngeSonto, kusho ukuthi bagonqa usuku olulodwa. Umhlonyana wenziwa ngeSonto ngoba abakubo abadali bangamalunga ebandla lamaNazaretha (Shembe), uMgqibelo usuku labo le Sabatha ngako-ke abawenzi amasiko noma imicimbi ngo-Mgqibelo.
Emuva kokuba lamanye amantombazane afike, o-anti no gogo bakhe bafika beza kulendlu ababe gonqele kuyo, babatshela ngokubaluleka kokuzigcina uphephele uze ufike esigabeni sokuthi uyoshada. Baphinde babachazela ngokubaluleka kwalomcimbi wokukhuliswa. U-Nokwanda wangichazela ukuthi, ngaphambi kokuba kuhlwe, ngo-Mgqibelo, ubaba wakhe wangena nembuzi ayiyizohlatshwa, waguqa phansi emthini. Emuva kokuba ihlatshwe imbuzi, ubaba wakhe wathatha inyongo wayiconsisela ezandleni zakhe wamutshela ukuthi akayikhothe bese waphinde wayiconsisela esifubeni. Ubaba wakhe wamuchazela ukuthi, ekusene bese beyogeza emfuleni kumele ayigeze inyongo futhi yena ageze kangcina bese ephonsa imali emuhlophe emele inhlanhla. Batshelwa ukuba bengabheki emuva (emfuleni) endleleni eya ekhaya ngoba bengase behlelwe ibhadi. Bese benza njengoba betsheliwe, baqonda ekhaya ukuyolungiselela ukusina. U-Nokwanda wagqoka isiketi sobuhlali, wafaka nobuhlali obuhamba emqaleni nasezinyaweni.nce.
U-Nokwanda uthi kwakumnandi ukubona bonke labantu ababeze emcimbhini wakhe, izihlobo zakhe, abangani nomakhelwane. Ufunde okuningi, ufunde nokuthi izinto azihambi ngendlela ufuna ngayo ngasonke isikhathi nokuthi umndeni ubaluleki kakhulu, uwusizo kwizimo eziningi. Ujabule kakhulu kuwowonke lomcimbi wakhe womhlonyana.
Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo 11/5/13
Kuncane engikwaziyo ngoTokoloshe noma uTikoloshe kukumuntu ukuthi ubiza kanjani, engikwaziyo ukuthi utokoloshe umoya omubi. Angikaze ngiwubone utokoloshe noma ngibenomngane owake wawubona, kodwa ngisafunda emabangeni aphansi sasinokuzwa izindaba eziningi ngawo ikakhulukazi izinganekwane. Mina ngafunda emaNdiyeni emabangeni aphansi angikhumbule ngizwa noma ngibona ingane zihayiza zithi zibone utokoloshe.kodwa ngangizizwa kakhulu lindaba katokoloshe ezinganeni ebezifunda ezikoleni zabantu abamnyama ikakhulukazi iPrimary School esiduze noma eyakhelene ne-Ohlange Institute, Amandlakayise Primary School. Izingane esihlala nazo ngasekhaya zazibuya esikoleni zisitshele ukuthi kunengane ebone utokoloshe eskoleni emfuna amasi futhi kwakunendawo lapho ababethi kuhlala khona utokoloshe leyondawo isakhona namanje ngaphakathi Ohlange Institute.
The hole where people believe a tokoloshe is hiding
Ziningi izindaba nezinganekwane umuntu ake azizwa ngotokoloshe ezinye esengazikhohlwa kodwa ngikhumbula inganekwane eyodwa ethi “ Indaba katokoloshe yaqala emnyakeni eyikhulu yadlula, lapho ekwakukhona umfana omncane owayegangile kakhulu endaweni futhi wayesihluphe kakhulu emphakathini kanti ngelinye ilanga wahlupha inyanga. Lenyanga yabona ukuthi indlela yokuvimba lomfana ukuthi ayeke ukudelela noma ukuhlupha wamthatha wayanaye olwandle wafika lapho wamishaya ngosawoti. uMfana kwadingeka ukuba aphenduke into embi futhi esabekayo, waba umfana ongange kakhulu kunakuqala futhi ahluphe kakhul kunakuqala kwaze kwafika lapho umphakathi okathala khona wabona ukuthi bambulale umfana”. Enye inganekwane ithi “ utokoloshe into emfishane kakhulu evela ezinganeni ezincane inenzinzipho ezinde nezingubo ezigugile nezidabukile ufike afune amasi enganeni ukma ungamniki uzokushaya ngempama ebusweni.
Umbono wami njengomkrestu utokoloshe usetshenziswa njengomoya omubi izinyanga ukuvikela noma ukuthakatha. Isibonelo uma umndeni othile wenza umsebenzi noma umcimbi wokuqinisa umuzi ukuzi uzovikeleka emoyeni emibi babiza inyanga: inyanga izofaka otokoloshe ukuzi izokwazi ukuvike lomndeni kweminye imoya emibi, kahle kahle basuke belwa umoya omubi ngomoya omubi. Inking iqala la uma babotikoloshe noma abaqaphi simo beqala ukujwayela kulomuzi besebeqala kukukhululeka besebayayeka ukwenza umsebenzi abawuzela kulomuzi. Bese lomndeni ubize enye inyanga ngoba becabanga ukuthi inyanga yokuqala ayisebenzanga nenyanga yesibili izofaka utikoloshe bakhe abazosebenza unyaka noma emibili nabo besebeyajwayela bakhululeke nje ngabo kuqala besebeba abangani notikoloshe bokuqala ababathole kulomuzi . labotikoloshe baba umndini kulomndeni besebezalisana bande besebehlupha izingane zalomndine ominikazi wendlu noma womuzi.
UJohn Medley Wood nedobo laseNanda
UJohn Medley Wood (1827-1918), ubaba webhothani KwaZulu Natali, eyatholwa iNatali Hebhariyamu futhi nguyena ekuqaleni owadala ingadi iBhothanikhi eThekwini. Nalapho wayengenakho ukuqeqesheka eBhothani. Waqoqa ngobuhlakani, wathola izinhlobo ezintsha zezitshalo futhi washicilela omningi umsebenzi wephiyano ezimpandeni zomphakathi. Izitshalo zakhe eziningi wayeziqoqa odobeni lwaseNanda, lapho owayenepulazi khona futhi ephusha isitolo sokuhweba. Izitsalo ezinye zethiwa amagama emuva kweNanda, kufaka igrassula inandensis, igladiolus inandensis, ipavetta inandanensis nethephrosia inandensi.
Isitayela sikaDavid sashicilela indaba kaWood empilweni yezitsalo.
iqoshwe ngu eNanda.co.za	in Amasiko & Amagugu, Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi	0 imibono
Impophoma yaseMzinyathi – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda
Kubalulekile ukunika imvumo kulendayo emangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona futhi kubuyiswe nokubuka izindawo eziningi eduze naseNanda.
Ukubuka indawo ejabulisayo noma enesipiliyoni sezigigaba kukho konke endaweni.
Ukubuka indawo ephezulu ezintabeni
Ukuncebeleka, ukushayela, ukuzidlalela, ukuhamba ngesikebhe kanyeneziphu layiningi.
Ukuvakashela indawo yamaRasta.
Kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuhlonipha ukuzimela kwemvelo ngokwenza ngcono zonke izinto ezenziwa ngezandla ngezinga elikhulu ngokuhlobisa umhlaba.
Ukuvikela umhlaba omanzi ngaphezu kwentaba yamanzi.
Ukigcina, ikakhulukazi okuqondene nokungcola
Kunesitolo esincane eceleni komgaqo ukuthola okuya ngasethunjini, ukuxazulula izinkinga zonogada, ukuhlanza indawo nokuxhasa abantu bendawo. Umnikazi usondele futhi ukukhali.
iqoshwe ngu eNanda	in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi	0 imibono